Posted by ညီလင်းသစ် au 8.5.11
ဘ၀မှာ ဖြတ်သန်းရတဲံ စာမေးပွဲတွေကများသား . . . ဘ၀ စာမေးပွဲ အတန်းတင် စာမေးပွဲ လုပ်ငန်း စာမေးပွဲး)) ဟုတ်ပါ့ဗျာ အဲဒီထဲမှာတော့ တက္ကသီလ စာမေးပွဲတွေကတော့ အရည်းအချင်း အနိမ့်ဆုံးပါပဲ
ကျမလေးတန်းတုန်းကလည်း အတန်းပိုင်ဆရာ အရိုက်ကြမ်းတဲ့သူနဲ့ဆုံဖူးတယ် ကိုယ်ကတော့ အရိုက်မခံရပါဘူး ဆရာနာမည်ကလည်း မှတ်လို့လွယ်တဲ့နာမည်မျိုးဘဲလေ ဦးနေ၀င်း လို့ခေါ်တယ် .. စာမေးပွဲဆို ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးကတည်းက ဘယ်စာမေးပွဲမှ မဖြေချင်တော့တာ ...
စာမေးပွဲတွေကိုမုန်းပေမဲ့ သူတို့နဲ့မကင်းနိုင်သေးဘူး :’(
ပျော်ရွှင်ခြင်း ၇ ထဲမှာစာမေးပွဲအကြောင်းရေးထားတာ...
အစကတော့တက္ကသိုလ်ဖိုင်နယ်လ်ပြီးရင် ဘယ်တော့မှစာမေးပွဲဆိုတာ မလာနိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်နေခဲ့တာ....
ကျက်ရတဲ့စာတွေ၊ မေးခွန်းမှာပါပါ့မလား၊ ပေးထားတဲ့ အချိန်လောက်ပါ့မလား၊ ဖြေနေတုန်းစာတွေမေ့သွားမလား၊
စာမေးပွဲ.... ကျောင်းသားတွေဖြေနိုင့်ပါ့မလား၊ ကိုယ်စောင့်တဲ့ စာမေးပွဲအခန်းထဲမှာ ပြောရခက်တဲ့ (ခိုးချကြတဲ့) ကျောင်းသားတွေအများကြီးပါမှာလား၊
ကျောင်းသားတွေအဖြေထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ်ပေး တဲ့အချက်တွေပါရဲ့ လား၊ ဂုဏ်ထူးပေးဖို့သင့်ရဲ့ လား၊ မဖြေနိုင်တဲ့သူတွေ ကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ.....
စာမေးပွဲ... ဖြစ်နိုင်ရင် မပတ်သက်ချင်တော့ပါ။။။။
ခုံနံပတ်ထိုး ၃၉၊ဘေးမျဉ်းဆွဲချ အောင်မှတ်ရ၊မဖြေတဲ့သူနဲ့
သေတဲ့သူပဲကျတယ်ဆိုတဲ့ ညန်မာပြည် စာမေးပွဲတွေက
တော့ဖြင့်အကိုရာ...(ပြောမယ့်သာပြောရ ကျွန်တော်လည်းဒီလိုနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့တာ....:)))
သြော် ကျောင်းသားဘ၀က စာမေးပွဲ
နောက် ဘ၀စာမေးပွဲတွေ ဘာတွေ
ဘယ်လောက် ဖြေရအုံးမလဲ မသိပါဘူး
မဖြေနိုင်လည်း ဖြေရမဲ့ တာဝန်ရှိနေတော့
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ တက္ကသီလာ စာမေးပွဲတွေက ခက်ခဲလေးနက်ပြီး အရည်အသွေးတွေ မြင့်နေရမယ့်အစား ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာတော့ ဝမ်းနည်းစရာ ပါပဲဗျာ၊
မ mig nge ...
အရိုက်မခံရဘူး ဆိုတော့ တော်တာပေါ့ဗျာ၊ ကျနော် လေးတန်းတုန်းကတော့ လွတ်ကိုမလွတ်ဘူး၊ အနည်းအကျင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အရိုက်တော့ခံရတာပဲ..၊ :(
သူတို့တွေနဲ့ ကင်းဖို့ကတော့ မလွယ်လှပါဘူးဗျာ..၊
ကျနော်လည်း တက္ကသိုလ်ဖိုင်နယ်လ် ဖြေတဲ့ နောက်ဆုံး နေ့က အဲဒီလို တွေးမိခဲ့ဖူးတယ်ဗျ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း (၇) ကိုလည်း စောင့်နေတယ်နော်...၊
ဟုတ်တယ်နော်၊ ဖြေသူပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေး ရသူပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မောစရာတွေချည်း ပါပဲဗျာ..၊
ကျနော်တို့ အများစုက ဒီလိုတွေနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ ကြရတာကိုး၊ အကျိုးမရှိတဲ့ စာမေးပွဲတွေကိုတော့ ကျနော်လည်း မဖြေချင်တော့ဘူးဗျ..၊
တချို့စာမေးပွဲတွေက မဖြေမနေရဆိုတော့လည်း မကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ရုံမှတပါး ... ...။
ကျွန်တော့်အတွက်စာမေးပွဲဆိုတာ..ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ Qualify ဖြစ်ကြောင်း Confidence ရှိစေတယ်။ နောက်... Career စာမေးပွဲတွေမို့လို့ Result နောက်မှာ ပိုမြင့်တဲ့ salary ဆိုတာကြီးစောင့်နေတယ်။ Anyway.. another nice post bro, Good luck to your exam, Cheers.
စာမေးပွဲဆို မဖြေချင်တော့တာက မှတ်သားချင်စိတ် မရှိတော့လို့...။ အသက်လေးရလာတော့ ဘာကိုမဆို သက်တောင့်သက်သာပဲ နေချင်လာတော့တယ်။ ငယ်ငယ်က စာမေးပွဲဖြေခါနီး စာမေးပွဲခန်းရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ စာမကြည့်တတ်တော့တာ သတိရတယ်။ လာချင်တာလာ ငါရတာဆို ဖြေမယ် အဲသလို အေးအေးလူလူ နေတတ်တယ် ဟဟဟ :)
ညီကတော့ ခိုးချဖူးတယ်း) အစ်ကို့စာဖတ်ပြီး ခုမှရှက်ရကောင်းမှန်းသိတော့တယ် ။
ကျွန်မလဲ စာမေးပွဲတွေ အများကြီးဖြေခဲ့ဖူးတယ်
စာမေးပွဲတစ်ခုဖြေပြီးတိုင်း တော်ပြီ စာမေးပွဲဖြေတဲ့အလုပ် ဘယ်တော့မှ မလုပ်တော့ဘူး စိတ်ကူးမိပေမဲ့ ဖြေပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ စာမေးပွဲ မရှိတော့ရင် နေလို့ထိုင်လို မကောင်းတော့ဘူး
နောက်တစ်ခု ဖြေဖို့ ပြင်ဆင်နေမိပြီ။ စာမေးပွဲတွေကို သိစိတ်က ကြောက်၇ွံ့နေပေမဲ့ မသိစိတ်က စွဲမက်နေမိပြန်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာမေးပွဲရှိမှ ကြိုးစားချင်စိတ် ရှိနေတယ်လို့ ထင်နေမိတယ်
စစ်မှန်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ စာမေးပွဲတွေက တကယ်ပဲ ကိုယ့်အတွက် မှတ်ကျောက်မို့ ဖြေကောင်းတဲ့ အရာတွေ ပါပဲ၊ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ..၊
စာမေးပွဲတွေကို သွေးအေးအေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့လူက အလိုလိုနေရင်း တပန်းသာနေ ပြီးသားပဲ၊း)
အဲဒီလိုလည်း မတွေးပါနဲ့ဗျာ..၊ နေရထိုင်ရတဲ့ အခြေအနေကြီးကိုက ကျနော်တို့ကို ဘေးထွက်လမ်းတွေပေါ် တွန်းပို့နေခဲ့တာ မဟုတ်လား၊
အဲဒီလို driving force၊ မောင်းနှင်အားတွေ ရှိမှလည်း လူဆိုတာက ရွေ့ချင်ကြတာ မဟုတ်လား၊ စာမေးပွဲ အပေါ် ထားတဲ့ အမြင်လေး လှတယ်....။း)
အစ်မ English Literature တက်နေတာ.. စနေနေ့ကမှ စာမေးပွဲဖြေပြီးတာဆိုတော့ ကိုယ့်အစ်မကိုယ်စားများ ခံစားလေသလားလို့ :D
ကိုယ့်အမှားကို မိသားစုကပါသိပြီး ၀ိုင်းစ တာခံခဲ့ရလို့ ကိုယ့်အမှားကို အခုထိသတိရနေတယ်။
အိမ်မှာအတူနေတဲ့ ဦးလေးက စာသင်ပေးတယ်။ စာမေးပွဲဖြေတဲ့စာရွက်လာရင် ပထမဆုံးကွက်လပ်မှာကိုယ့်နံမည်ကိုယ်ရေး တဲ့။
စာမေးပွဲပြီးတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမက အမျိုး။ အိမ်ကိုလာပြောတယ်၊ အားလုံးမှန်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲမှားတယ်။
မေးခွန်းနံပါတ်တစ်ရဲ့ ကွက်လပ်မှာ သူ့နံမည်ရေးသွားလို့တဲ့။
၂။ (၀တ်စုံ) ၀တ်ထားသည်၊
နည်းနည်းကြီးမှ သိရတာက အဲဒီတုန်းက စာဖြေစာရွက်မှာ ခုံနံပါတ်ပါပြီးသားတဲ့။ ဦးလေးက သူ့ထင်တာသင်ပေးလိုက်တာ ကို ကျွန်မကလည်း တစ်သွေမတ်ိမ်းလိုက်လုပ်ခဲ့တယ်။
ကြီးတဲ့အထိ အိမ်မှာ နံပါတ်တစ်မေးခွန်းအတိုင်း အစခံရတာပေါ့။
စာမေးပွဲအသံနဲ့တင် အိပ်မက်ဆိုးတွေ...မက်ခဲ့ဘူးတာလေး ပြန်လည် သိတရမိတယ်အကို...ခုထိလဲ စာမေးပွဲနဲ့ မလွတ်နိုင်သေးဘူးလေ...:):)
ကိုညီလင်းရဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ်ဖြေခဲ့ဖူးတဲ့ စာမေးပွဲတွေအကြောင်း ပြန်စဉ်းစားမိသွားတယ်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ မြန်မာစာ မဖြေခင် တနင်္ဂနွေနေ့ညမှာ TV မှာ လာနေတဲ့ Love Boat ကြည့်နေနိုင်ခဲ့သေးတာ မှတ်မိတယ်။
RIT တက်ခဲ့တဲ့ တလျှောက်လည်း မရရင် မဖြေ ရတာတွေပဲ ဖြေခဲ့တယ်...။ ဒီလိုပဲ တလိမ့်လိမ့်နဲ့ အောင်လာခဲ့တာပါပဲ...။ အခုတော့ ဘာစာမေးပွဲမှ မဖြေချင်တော့လို့ အေးရာ အေးကြောင်းပဲ..။
သားစာမေးပွဲဖြေရင်တော့ စာမေးပွဲဆိုတာ ကိုယ်ရတာတွေချည်းပဲ မေးလာမှာမဟုတ်ဖူး... မရတာတွေ ပါလာရင် စိတ်မညစ်ဖို့ ကိုယ်ရတာတွေကို သေသေချာချာ ဖြေဖို့ပြောရတယ်...။
အသက်သာကြီးလာတယ်။ စာမေးပွဲနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ခြောက်အိပ်မက်တွေခုထိမက်တုန်း။ဒီကစာမေးပွဲတွေဖြေတုန်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကစာမေးပွဲတွေကုိုသတိရမိတယ်။ စာဖတ်ချင်တယ် စာမေးပွဲမဖြေချင်ဘူး။ အသက်ကြီးမှဖြေရတဲ့စာမေးပွဲတွေမှာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားရတုန်းပါဘဲကုိုညီလင်းသစ်ရယ်။ အမှတ်များများရရင်တော့ သိပ်ကျေနပ်မိတာ ဒီကစာမေးပွဲဘဲ။
အမအတွက်တော့ စာစစ်သူဖက်က ကြုံရတဲ့ စိတ်ကျဉ်းကျပ် စရာတွေက ပြောကုန်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တယ်နော်၊ English literature တက်ခွင့်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ၊ အားကျတယ် အမရေ..၊း)
ကွက်လပ်မှာ နာမည်ရေးခဲ့တာ ဖတ်ကြည့်ပြီး သဘောကျ လွန်းလို့ ထိုင်ရယ်နေမိတယ်၊ တကယ့်ကို စ,ချင်စရာပဲကိုး၊ တူမလေး တစ်ယောက်ကတော့ မေးခွန်းမှာ ကြိုက်ရာရွေး၍ ဖြေပါ တွေ့တော့ တစ်ပုဒ်မှ မကြိုက်လို့ မဖြေဘူး-ဆိုပြီး ဒီအတိုင်း အိမ်ပြန်လာတယ် ..၊းD
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ စာမေးပွဲတွေက အိပ်မက်တွေထဲ အထိ တခါတခါ လိုက်ခြောက်တယ်နော်...၊
ဟုတ်သားပဲ၊ Love boat က တနင်္ဂနွေညမှာ ပြတာ အခု ပြန်သတိရ သွားပြီ၊ love boat ကိုသိတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ခေတ်ပြိုင်တွေ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..အဟဲ၊
ကျနော်လည်း အတူတူပဲ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို ဖတ်ချင်တယ်၊ ဖြေချင်ပေမယ့် မဆိုင်တဲ့ မိုင်နာဘာသာရပ်တွေ ဆိုရင်တော့ အရမ်းပျင်းတယ်..။း)
ဆက်လက်ပြီးလည်း ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဖြေဆိုနေကြရဦးမှာပါ။
Hey Ko Nyi,
This post called my memories back to Hlaing Campus in 91-95(neighter as student nor from B department like Nyein Khet).Good luck for your new lesson and exam.
၉၁-၉၅ ဆိုတော့ ကျနော်တို့တွေ ကော်ရစ်ဒါမှာတောင် ဆုံချင် ဆုံခဲ့လိမ့်ဦးမယ်၊ ကျနော်က ၉၄ မှာ အာရ်စီတူး မှာ တက်ရတာပါ..။
Best of luck for your upcoming exams!!!!